Ibhalansi enzima phakathi kwemfihlo kunye nophuhliso lweSiri luxhalabisa iApple | Ndisuka mac
Kubonakala ngathi ikwindalo yeApple kufuneka ijongane nokuphikisana kwayo. Ngexesha leminyaka, I-Apple yenze ukuba ukhuseleko lwabucala lube lolunye lweempawu zayo, ngakumbi ngokuchasene nomntu okhuphisana naye kwiinjini yokukhangela, owona msebenzi wakhe uphambili kwintengiso, ethi yona isekwe kwidatha yabasebenzisi bayo. Kodwa yintoni kwelinye icala ebeluncedo olukhulu ekuphumeleleni nasekuhlanganiseni inkxaso yezigidi zabasebenzisi, inokuba ikukubeka inkampani kwimeko ethile.
Njengoko kutyhilwe yiWall Street Journal, ababesakuba ngabasebenzi beApple abasebenza kuphuhliso lukaSiri bathi umncedisi onenyani unomlo onzima wokufumana abachasi bakhe (Ikhaya likaGoogle, iAmazon Alexa) ngenxa yenkxalabo enkulu yenkampani yokukhusela imfihlo yomsebenzisi.
1 Siri, phakathi kwemfihlo kunye nemfuneko
1.1 Ukubeka phambili inkcubeko yabucala
1.2 Ukuphulukana nexabiso lomntu
1.3 Ngaba "uSiri uhlala eyisidenge"?
Siri, phakathi kwemfihlo kunye nemfuneko
Ngempumelelo, Iziphikiso ziyinxalenye yendalo ka-Apple, kwaye ayiloxesha lokuqala ukuba izicwangciso kunye nemigaqo yakhe iye yaqhekeka. Xa uSteve Jobs wazisa umhlaba kuloo nto "i-iPhone enkulu" engaqondakaliyo eyayiyi-iPad, wakhawuleza wabhengeza ukuqala kwexesha le-post-PC kodwa kwathatha ixesha elide iminyaka esixhenxe ukuba i-iPad ihambise loo nto. inyathelo elikhulu evumela uninzi lwethu, ingesithi sonke, ukuba sipake iikhompyuter zethu kwaye sihambe ngokukhululekileyo, sisebenza kwaye sonwabele ixesha lethu lokuzonwabisa kunye ne-iPad yethu. Kwaye khumbula, iApple yinkampani eyenza iikhompyuter, kwaye ukuba i-iPad ayenzi le nto yenziwa yiMac, abasebenzisi abaninzi baya kuba nezixhobo ezibini. Njengeshishini, kuhlala kungcono ukuthengisa izixhobo ezimbini kumsebenzisi ngamnye kunokuthengisa enye, akunjalo? Le yenye yezona zinto zidumileyo zijongileyo iApple. Enye, ibhalansi enzima phakathi kokugcina imfihlo yomsebenzisi kunye nokufezekisa isikhundla sayo esifanelekileyo kwicandelo labancedisi.
Masingabi ngabapapa ngakumbi kunoPopu. Bubungqina bokuba iSiri ayisebenzi njengokhuphiswano lwayo oluvela eAmazon kwaye, ngaphezulu kwako konke, kuGoogle. Kodwa isizathu siyabonakala, kwaye siyancomeka: I-Apple ayenzi shishini ngedatha yomsebenzisi kwaye ke ayisebenzisi loo datha ukuphucula iSiri, okanye ubuncinci yile nto inkampani ifungayo kunye nokuthembela ngalo lonke ixesha inethuba lokumakisha umgama ngeGoogle.
Ukubeka phambili inkcubeko yabucala
Ngokungafaniyo nezinye iingxilimbela ezimbini, iAmazon kunye neGoogle, abasebenzisa kwaye bagcine idatha yabasebenzisi babo ngaphaya kwezixhobo zabo (efini) Ukondla ulwazi oluxabisekileyo kwizithethi zabo ezifanelekileyo kwaye baphucule imibuzo yabo kunye nokusebenza ngokubanzi, U-Apple uhlala eqinile kwinkcubeko ebeka phambili ubumfihlo babasebenzisi, ngaphandle kwento yokuba oku kukukhubazeka kwindaleko kaSiri.
Ukuphulukana nexabiso lomntu
Kwelinye icala, kwiphephandaba le-TWSJ, ubunzima benkqubela phambili kaSiri buchazwa njengesizathu esibalulekileyo Ukuhamba kwamanye amalungu aphambili ale projekthi, abanye babo baye kukhuphisana. UBill Stasior, owayesakuba ngumphathi weAmazon ozinikezele kulawulo lweSiri uphuhliso, ngomnye wabo; ishiye iprojekthi unyaka emva kokubhubha kukaServ Jobs kwaye amanye amalungu elo qela abonisa ukuba esi sesona sizathu siphambili sokuba UAdam Cheyer kunye noDag Kittlaus, abaququzeleli bokuqala bakaSiri, nabo bayishiya. Ngendlela, le yokugqibela yaya eViv, kamva yafunyanwa yiSamsung, kwaye ngoku isebenza ngokusondeleyo kunye neqela leBixby, umncedisi omtsha we-Samsung okhutshwe kwi-Galaxy S8 kunye ne-S8 Plus kwaye, ngendlela, esele yenziwe isiqingatha.
Ngaba "uSiri uhlala eyisidenge"?
Kunyaka ophelileyo, U-Apple waqala ukuvula iSiri kubaphuhlisi, nangona kunjalo, kwiinjineli ezininzi ibe sisigqibo sokugqibela, ngelixa abaphuhlisi begcina inqanaba elithile lokungoneliseki ngeli nqanaba laneleyo lokuvuleka. UBrian Roemmele, omnye waba baphuhlisi, uyaphawula ukuba Uluhlu olulinganiselweyo lwemiyalelo yeSiri ludanisile abaninzi ababhekisi phambili: «Abantu baye basuka ekubeni bonwabile kwaye bonwabile baya kuhlala kwiindibano zocweyo kwaye beqonda ukuba 'andinakusebenzisa'. Ke, "Abanye babuyela kweso simo sengqondo: USiri uya kuhlala esisiyatha."
Ngokutsho yalatha I-WSJ, Ukusebenza kukaSiri kusekude kwi-Echo yeAmazon okanye kwiKhaya likaGoogle; kuvavanywa imibuzo engaphezu kwama-5.000 XNUMX eyahlukeneyo, USiri uyakwazi ukuphendula ngokuchanekileyo i-62% yemibuzo, xa kuthelekiswa nomyinge we-90% yabakhuphisana nabongokweTempile iTye, inkampani yentengiso yedijithali.
Kunoko, USiri ugqamile kwiilwimi, kuba sele ikwazi ukusebenza ngeelwimi ezingama-21Ngelixa i-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle bathetha isiNgesi nesiJamani kuphela.
Ngaba uSiri uya kukwazi ukubamba kwaye angade enze ukhuphiswano nabo? Ngaba iApple iya kuyeka kwaye iqale ukusebenzisa idatha yomsebenzisi ukuphucula iSiri? Ngaba abasebenzisi bayakulungela ukwenza njalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukulingana okuluqilima phakathi kwemfihlo kunye nophuhliso lweSiri kukhathaza iApple